linoo-ayar: နှလံုးသားထဲက ေမွးေန့ပွဲ
By သစၥာ | သ​စ္စာ on 2:10 AM ကဗျာများ
ေဟာ ..... သူမ ေမွးေန့
ဒီေမွးေန့ပွဲကို ငါ့နှလံုးသားအထက်မှာ ကျင်းပခဲ့ချင်တာ
သူမကို ခွန်အားေတွ ြဖည့်ချင်တယ်
တံတားတစ်စင်းလည်း ေဆာက်ထားတယ် ။
အကယ်၍သာ သူမ ဒီမှာရိှခဲ့ရင်
ဧဒင်ဥယျဉ်ထဲက ကြကိုးစံုညီတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲြဖစ်ခဲ့မှာ။
ြမို့ပတ်ရထားနဲ့ ဧဒင်ကမ္ဘာကို ပတ်မယ်
မခါးတခါး ေကာ်ဖီကို အတူေသာက်မယ်
မာနနဲ့ သိက္ခာေတွ ချထားြကမယ် ။
ရင်ထဲက ေမတ္တာနဲ့ ဆုေတာင်းပါတယ်။
အြပံုးနဲ့ အြမဲေပျာ်ေနတာကိုပဲ ြမင်ချင်ေနတာပါ။
42 Response to 'နှလံုးသားထဲက ေမွးေန့ပွဲ'
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221934334607#c5936004783853996361'> September 20, 2008 at 11:12 AM
ချစ်သူေလးေမွးေန့မှ ေန့ရက်ေပါင်းများစွာ ေပျာ်ရွင်နိုင်ပါေစရှင်.။
အဟဲ အေပါ်က ေြပာသွားသလုိပါပဲ။ ြမန်ြမန်နီးပါေစ း)
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221934717113#c5967524320591186907'> September 20, 2008 at 11:18 AM
ကဗျာေလးခံစားြပီး လာချီးြမျင်.သွားပါတယ်။စားေသာက်ြ့့ပီ.။ Happy birthday
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221936279315#c700247511941188247'> September 20, 2008 at 11:44 AM
ေမွးေန့ပွဲကုိကျွန်ေတာ်လည်းတက်ေရာက်ပါတယ် ခင်ဗျာ စားရေသာက်ရတာ ဗုိက်တင်းေတာ့တက္ကစီေလးနဲ့လုိက်ပုိ့ ဗျာ အဟီး
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221938066861#c3900375348116097729'> September 20, 2008 at 12:14 PM
အကုိေရ အကို့ေကာင်မေလးနဲ့ အတူတကွအိုေအာင်မင်း
မယ် အကို့ကိုအားကျတယ်ဗျာ ဟားဟား
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221938066862#c2181421170237821704'> September 20, 2008 at 12:14 PM
ချစ်သူနှစ်ဦးတို ့၏ ယေန ့ေမွးေနမှသည် ေနာင်နှစ်ေပါင်းများစွာတိုင်ေအာင် ကျန်းမာေပျာ်ရွင် လိုအင်ေတွ ြပည့်၀ပါေစခင်ဗျာ။
မုန် ့ေတွက အဆီအစိမ့်ေတွများတယ်ဗျာ။ မြကိုက်လို ့မဟုတ်ဘူး ။အီေတာ့ များများ မစားနိုင်လို ့။ ဟီးဟီး
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221938844446#c3157056239629387216'> September 20, 2008 at 12:27 PM
ကိုလင်းဦးေရ မုန့်နဲ့ ေကာ်ဖီတာ့ ေသာက်သွားတယ် ချစ်တဲ့သူနဲ့ အတူတကွေနရပါေစလို့ ဆုေတာင်းေပးပါတယ် ေတာင်းတ့ဲဆုကို ကိုလင်းဦးေကာ ကျွန်ေတာ်ေကာ ြပည့်ပါေစ... ဟတ်ဟတ်
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221941718339#c7216046317344671079'> September 20, 2008 at 1:15 PM
မဖိတ်ပဲနဲ့ကို လာေရာက် စားေသာက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221943407897#c4311034607653843099'> September 20, 2008 at 1:43 PM
ကဗျာေလးကို ဖတ်ရင်း ရင်ထဲ အေတာ်ေလးထိခိုက်သွားပါတယ်--------
ြဖစ်ချင်တာထက် ြဖစ်သင့်တာေတွပဲလုပ်ေနြကရတဲ့ သူေတွ ----ဘဝတိုက်ပွဲများစွာ--အတွက် ေလဒဏ်မိုးဒဏ်ကို ြကံ့ြကံ့ခံြပီး အားမာန်ကို တင်းရင်းေလှာ်ခတ်ြကရပါတယ်ေလ----
အားမေလှျာ့ပါနဲ့ေနာ် ---- သစ္စာတရားကို တန်ဘိုးထားြပီး ေအးအတူပူအမှျ ေြဖရှင်းသွားြကရင်--------ကိုလင်းဦးတို့ချစ်သူနှစ်ေယာက်ရဲ့အနာဂါတ်ေလး ထာဝရ လှပေနမှာကို ေမှျာ်လင့်မိပါတယ်----
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221947317571#c1863506322900715434'> September 20, 2008 at 2:48 PM
ချစ်ေသာသူနှစ်ဦး ရာသက်ပန်ေပါင်းေဖာ်လက်တွဲေပျာ် ရွှင်နိုင်ပါေစေြကာင်းဆုေတာင်းေပးပါတယ်ရှင်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221952087925#c804526601775842283'> September 20, 2008 at 4:08 PM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221958724800#c6274808031274573874'> September 20, 2008 at 5:58 PM
ေပျာ်ရွှင်ပါဗျာ။ ချစ်သူေမွးေန့မှာ သူ့အတွက်ေမွးေန့
ပွဲေလးလုုပ်ေပးနိုုင်တာကိုုအားကျတယ်ဗျာ။ ချစ်ရသူနဲ့ ့အြမန်ဆံုုး
နီးပါေစဗျာ။ မုုန့်ေတွေတာ့စားသွားတယ်ဗျာ ေမွးေန့လက်ေဆာင်
ေတာ့ ြကံုမှေပါ့. ဟီးဟီး
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221959054517#c8488493574598166683'> September 20, 2008 at 6:04 PM
ချစ်သူေလးကိုေြပာေပးပါ HAPPY BIRTHDAY !! လို့
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221959359723#c3252836839766875380'> September 20, 2008 at 6:09 PM
Happy Birthd ကိုလင်းဦး ေကာင်းမေလးေရ... ေနာင်ေမွးေန့များမှာေတာ့ အတူရှိေနပါေစေနာ်..
By the way Sept 21 is world peace day.. so peace to be with you guys...too
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221963802142#c1102173080406786722'> September 20, 2008 at 7:23 PM
ဖိတ်တဲ့အတွက်ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ အရမ်းခံစားရတယ်။ ထပ်တူထပ်မှျပါ။ ကဗျာေလးက ကျေနာ်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်ေနတယ်ေလ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221964544392#c6860267897264787737'> September 20, 2008 at 7:35 PM
အများြကီးလာစားသွားပါတယ်ရှင့်.. အစ်ကိုြကီးနဲ ့မမေလး ြမန်ြမန်နီးစပ်ပါေစ! မဂင်္လာပွဲကျရင်လည်း သမီးကိုဖိတ်ေနာ်။ ပန်းြကဲေပးမယ် သိလား? :)
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221965815827#c1166978576772855861'> September 20, 2008 at 7:56 PM
ကိုလင်းဦးတို့ နှစ်ေယာက် ေပျာ်ရွှင်အဆင်ေြပလို့ အြမန်ဆံုးနီးစပ်နိုင်ြကပါေစေနာ်။
The future is not blurred when you two love each other for sure.Believe me!!!! :)
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221966961678#c825848355080022559'> September 20, 2008 at 8:16 PM
ဖိတ်ြကားေြကာင်း နားစွန်နားဖျား ြကားလုိ့ လာေရာက် စားေသာက်ပါတယ် =)
အြမန်ြပန်ဆံုြပီး ေနာက်ေမွးေန့ေတွမှာ ဧဒင်ဥယျဉ်ထဲက ကြကိုးစံုညီတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲစီ ြဖစ်လာပါေစ =)
(^.^)/* wish you Happy Birthday!
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221968150075#c931073372838472495'> September 20, 2008 at 8:35 PM
ေမွးေန့ပွဲ တက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဆင်ေြပပါေစ
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221968901324#c7952345282541439651'> September 20, 2008 at 8:48 PM
ေမွးေန့မှ စြပီး ေနာင်နှစ်ေပါင်းများစွာတိုင်
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221969071067#c969772972136098497'> September 20, 2008 at 8:51 PM
Happy B'Day ပါ ကိုလင်းဦးရဲ့ ချစ်သူေလးေရ့
အြမန်ဆံုးနီးနဲ့ ပုဂံလံုးစီးြပီး ြမန်ြမန်ဆံုနိုင်ပါေစဗျာ....
ချစ်သူရဲ့ေမွးေန့မှာ လွမ်းေနရတဲ့ ကိုရီးေရ့....
စိတ်ကူးထဲကအတိုင်း ေပျာ်ရွှင်မှုေတွနဲ့အတူ ဆံုးစည်းြပီး ေပါင်းဖက်နိုင်ပါေစဗျာ......
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221971791716#c5072532621241290479'> September 20, 2008 at 9:36 PM
HaPpy BiRtHdaY ပါ..ကိုလင်းဦးရဲ ့သူမေလး..ဟိဟိ....
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221973628713#c309598350068657773'> September 20, 2008 at 10:07 PM
ချစ်သူနဲ့ ေ၀းေနေပမယ့်လဲ ကိုလင်းဦးရင်ထဲက အချစ်ေတွကုိ ခံစားမိြပီး သူမလဲ ေမွးေန့မှာ ေပျာ်ရွှင်ေနမယ်လို့ ယံုြကည်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ေနာင်လာမယ့် ေမွးေန့ေပါင်းများစွာကို နှစ်ေယာက်အတူ ေပျာ်ရွှင်စွာ ြဖတ်သန်းခွင့်ရြပီး လှပတဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆုိင်နုိင်ပါေစလုိ့လဲ ဆုေတာင်းေပးပါတယ်။
I pray for the Party in your Heart ! Happy Birthday !!!
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221976997484#c1422304439100539155'> September 20, 2008 at 11:03 PM
ချစ်သူကို အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ ကိုလင်းဦး၊
ချစ်သူနဲ့ အြမန်ဆုံးနီးစပ်ပါေစလို့ ဆုေတာင်းေပးလိုက်ပါတယ်။
ေမွးေန့မှာ ေပျာ်ရွှင်ပါေစလို့ ညီမေလးကို ေြပာေပးပါ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221977132095#c5254980334769055837'> September 20, 2008 at 11:05 PM
ကိုလင်းဦးရဲ. သူမေလးအတွက် ေပျာ်ရွှင်စရာ ေမွေန. ့ေလး ြဖစ်ပါေစလို့ဆုမွန်ေကာင်း ေတာင်းေပးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ မုန် ့ေတွကို တ၀တြပဲြကီး အားေပးသွားတယ်ဗျို.။ ဧဒင်ဥယျဉ်ထဲက ကြကိုးစံုညီတဲ့ မဂင်္လာပွဲေလး ကျင်းပတဲ ့အခါကျရင်လည်း ဖိတ်ပါဦးဗျ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221986940615#c1785244548436418351'> September 21, 2008 at 1:49 AM
ေမွးေန့ပွဲေနာက်ကျသွားတယ် အကိုေရ ေဆာရီးဗျာ၊ ညက နဲနဲ များသွားလို့ အဟဲဟဲ၊ အစိအစဉ်အတိုင်းပဲ ကဗျာေလးအရင်ဖတ်တယ်၊ အေကွျးအေမွးေတွကိုြကည့်ြပီး သွားရည်ကျသွားတယ် :)
ချစ်သူနှစ်ေယာက် ထာ၀ရ ရိုးေြမကျ ချစ်ခင်နိုင်ြကပါေစလို့ ေနာက်ဆံုး ဆုေတာင်းေပးသွားပါတယ် အကိုေရ ..။ ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221990167629#c4914822972186850991'> September 21, 2008 at 2:42 AM
ေနာက်ေတာင်ကျေနြပီထင်တယ် ၊၊ ဟက်ပီး ဘတ်ေဒးပါ ၊၊ ဒီ ေမွးေန့မှ ကိုလင်း ဦး နဲ့ အတူ စိတ်တူ ကိုယ် တူ ေပျာ်ရွှင် ေသာခရီး ..အတူတစ်ကွ ေလှျာက် လှမ်းနိုင်ပါေစဗျာ ၊၊
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1221992347619#c839686356033181045'> September 21, 2008 at 3:19 AM
ရွာစား တစ်ြဖစ်လဲ.. နယ်သားေရ... ခင်ဗျားချစ်သူေမွးေန့မှာ
မင်းသမီး ခင်ဗျားချစ်သူနဲ့ မင်းသားရွာစားတို့ ... နှစ်ပါးသွား အြမန်ဆံုးကနိုင်ပါေစလို့ ဆုေတာင်းေပးလိုက်ပါတယ် ။ အဲဒီပွဲကျ ကျွန်ေတာ်ကိုယ်တိုင် လူရွှင်ေတာ် လာလုပ်မယ်ဗျာ။ ေလာေလာဆယ်ေတာ့ ေနာက်ကျလို့ ဘာမှမစားလိုက်ရဘူး ။ ေစာေရာက်လဲ မစားပါဘူးဗျာ ။
ေကျွးတာေတွက ကျွန်ေတာ်နဲ့ မတည့်ဘူးဗျ... ကျွန်ေတာ်က အခါးမှရတာ ... ေဂျာ်နီလမ်းေလျာက် ေလးဘာေလးရှိရင်ေတာ့ ကမ်းလိုက်ဗျား .. CHEERS !!! ရေအာင်ေပါ့... အေဟးေဟး
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1222006290200#c1378958823568799679'> September 21, 2008 at 7:11 AM
ေပျာ်ရွင်စွာ ေရွှလက်တွဲြပီး ချစ်ပွဲ၀င်နိုင်ပါေစဗျာ ....
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1222012772223#c981161516083718931'> September 21, 2008 at 8:59 AM
ေမွးေန့ကစလို့ ေနာင်ထပ် နှစ် ရာေထာင်ထိုင် ချစ်ေသာသူနှင့် ေပျာ်ေပျာ်ရွှင်ရွှင် ရှိနိုင်ပါေစဗျာ :)
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1222015393629#c4022714535708067304'> September 21, 2008 at 9:43 AM
ေမွးေန့ဖိတ်စာေတာ့ မရှိဘူး ဒါေပမယ့် ချစ်သူအေပါ်မှာ အနူးညံ့ဆံုးချစ်တတ်တဲ့ ကိုလင်းဦးရဲ့ ချစ်သူေမွးေန့ကို ဂုဏ်လာြပုတာ။ ကိုလင်းဦးတို့ ချစ်သူနှစ်ေယာက် အြမန်ဆံုးြပန်ဆံုေတွ့လို့ ေမွးေန့ပွဲကို နှစ်ေယာက်အတူတကွ ေပျာ်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲနိုင်ပါေစလို့ လိှုက်လိှုက်လှဲလှဲ ဆုေတာင်းေပးပါတယ်ဗျာ။ လက်ထပ်ြပီးလို့ အတူတူေနြကရင်လည်း အိမ်တစ်တိုင် တစ်တိုင်မှာ စိန်တစ်ခိုင် တစ်ခိုင်ပွင့်ပါေစဗျာ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1222025031774#c1513748745949590026'> September 21, 2008 at 12:23 PM
ကိုလင်းဦးတို့ ချစ်သူနှစ်ဦး အဆင်ေြပေပျာ်ရွှင်ြကပါေစ.. :)
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1222026962270#c7437755169747627423'> September 21, 2008 at 12:56 PM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1222049977313#c7467830921663479510'> September 21, 2008 at 7:19 PM
အခုလို ကျွန်ေတာ့် ချစ်သူေမွးေန့မှာ ဆုေတာင်းေပးြကတာကို ေကျးဇူးတင်လည်းတင်တယ်။ ၀မ်းလည်းသာပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အေနှာက်အယှက်ေလးေတွကေတာ့ ရိှေနဆဲပါလား။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1222051398650#c8917744881114146193'> September 21, 2008 at 7:43 PM
အကွာအေဝးေတွကို အချစ်ရဲ့စွမ်းအင်နဲ့ြဖတ်ေကျာ်ြကသလို အချစ်ရဲ့စွမ်းအင်နဲ့ပဲ ြကံု့ြပစ်နိုင်မယ်ထင်ပ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1222055058271#c5283355743422532538'> September 21, 2008 at 8:44 PM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1222059765319#c4509523821244503685'> September 21, 2008 at 10:02 PM
မုန့်ေတွစားချင်စရာြကီးး ဟီးး သူများကုိဒုက္ခေပးထားတာ ကုိယ်ြပန်ခံရတယ်.. အဟိ :P
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1222072196715#c5884265377883429966'> September 22, 2008 at 1:29 AM
ဧည့်သည်ေတွေတာင် ေတာ်ေတာ် စံုေနြပီပဲ...
ေမွးေန့ေလးမှစ၍ သူနဲ့သူမ ေပျာ်ရွှင်စွာ ချမ်းေြမ့ြကည်နူးစွာ ေပါ့ေနာ်...... :D
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1222093980108#c7587710871354216817'> September 22, 2008 at 7:33 AM
အဲ .. ေမွးေန့နဲ့တိုးေနလို့ အားေတာင်နာတယ်။ ပန်းကန်များ ကူေဆးေပးလို့ရမလားခင်ဗျ။ စားစရာေတာ့ ကုန်ေလာက်ြပီ။
ေသြခာေတာ့ နားမလည်ဘူး ဟီး သူများလိုဘဲဆုေတာင်းေပးပါတယ်။ အစစ အဆင်ေြပပါေစဗျာ.။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1222099797093#c3752235462453000848'> September 22, 2008 at 9:09 AM
MPT ရဲ့ Cache ေြကာင့် ေမွးေန့ပွဲကုိ လိပ်စာလည် လမ်းမှားေနလုိ့ဗျို့။ ေနာက်ကျမှ အေပါက်ဝကေန ြပန်ရေတာ့မှာလားဟင်။ မထူးပါဘူးေလ ပဂျန်တုန်းကလုိပဲ အုိက်တုိးပေဂးဆန် ြပီး ဆုေတာင်း ေပးလုိက်ပါ့မယ်။ ေမွးေန့ပွဲမှသည် ေနှာင်နှစ်ေပါင်း ၁၀၀ တုိင်ေအာင် ေပျာ်ရွှင်ချမ်းေြမ့ ေရွှလက်တွဲခုိင်ြမဲ စိတ်ကုိယ် ကျန်းမာချမ်းသာစွာြဖင့် ြဖစ်ချင်တာ ြဖစ်သင့်တာ ြဖစ်ေနတာ တထပ်ထဲ ကျနုိင်ပါေစ လုိ့။ ကဗျာက ခံစားချက်ြခင်း ထပ်တူကျေနလုိပဲ။ မနာလုိြဖစ်ေနြပီေနာ် ဟင်း
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1222116111800#c809291899705652272'> September 22, 2008 at 1:41 PM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1222143901248#c8951777894488836372'> September 22, 2008 at 9:25 PM
ဦးေလးြကီး လင်းဦး...မမကဘူလဲ...ပံုထဲမှာေတာ့ ချစ်စရာေလး သမီး ြမင်ဖူးတယ်ေနာ် မမကို ဦးေလးြကီးတို့ချက်ေနတာလည်း ေတွ့ပအဟိ ခုိးြကည့်ထားတာ ဦးေလးြကီးက ေရှ့ကချက်ေနတာ သမီးခိုးြကည့်တာ မသိဘူးမလား ...း)
မမကလည်းချစ်ပ ဦးေလးြကီးကို း)
ေတာ်ပီ သမီးသိေတာ့ ဘူး မုန့်စားြပီး ြပန်ပီ..
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post.html?showComment=1222211560708#c6373811371188804760'> September 23, 2008 at 4:12 PM
ေနာက်ကျသွားတယ်ဗျာ။ Sorry, ကိုလင်းဦး!